गर्भवती अवस्थामा किन स्तनको टुप्पामा कालो रङ देखापर्छ ? – Akhabar Dainik
गर्भवती अवस्थामा किन स्तनको टुप्पामा कालो रङ देखापर्छ ?
एजेन्सी । महिलाहरुले आमा बन्ने बेलामा आफ्नो शरीरमा धेरै परिवर्तनको अनुभूति गरेका हुन्छन् । गर्भवती अवस्थामा महिलाको शारीरिक तथा मानसिक दुवै अवस्थामा परिवर्तन आउने गर्दछ । यस अवस्थामा हुने परिवर्तनका बारेमा महिलालाई राम्रोसित ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
विशेषगरी गर्भवती भएका बेलामा हुने सुरुवाती परिवर्तनका बारेमा महिलामा राम्रो ज्ञान भयो भने यसले महिलालाई विभिन्न समस्या तथा गुनासोबाट टाढा राख्न मद्दत गर्छ । गर्भवती अवस्थामा आउने सुरुवातका केही परिवर्तन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
२ सम्पूर्ण महिलामा आफू गर्भवती भएको अनुभूति हुन्छ । यस्तो अनुभूति लगभग सत्य हुने गरेको छ ।
४.सहजै थकान महसुस हुने गर्दछ । यस अवस्थामा शरीरका हर्मोनमा वृद्धि भैरहेकाले महिलामा चाँडै थाक्ने तथा गाह्रो महसुस हुने गरेको हो ।
५ .बारम्बार पिसाब लाग्ने गर्दछ । यो अवस्थामा महिलाको पिसाब नलीमा पाठेघरले बढी चाप दिने भएकाले र मिर्गौलाबाट पनि अतिरिक्त रसायनहरु निस्कने भएकाले महिलाहरुलाई गर्भधारणको
९ महिनासम्म बारम्वार पिसाब लाग्ने गर्दछ ।
९. कव्जियत हुन सक्छ । यस्तो भएमा तुरुन्त डाक्टरकहाँ जानुपर्छ ।
१०. गर्भवती अवस्थामा महिलाको मन छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ । कहिलेकाहीँ उनीहरु ज्यादै सन्काहा हुन्छन् भने कहिले भावुक ।
११. ढाड दुख्ने गर्छ । पेटमा भएको बच्चाको तौलका कारण ढाड दुख्ने समस्या आउने गर्दछ ।}